Parking lalao - hilalao afaka amin'ny Lalao - Lalao
Indray andro any ianao dia hitombo ka hividy ny fiara, izay nofy ihany. Fa ankehitriny dia afaka manafaka hilalao lalao an-tserasera sy hahazo traikefa Parking ao amin'ny sarotra indrindra ampahany mitondra fiara. Ao amin'ny fanadinana tonga ny fotoana fiantsonan'ny mahatonga olana ny ho avy mpamily. Maro ela tsy afaka hahafehy izany fahaiza-manao izay azo avy amin'ny zavatra niainany. Ary raha ao tsara ny andro sao ianao mbola afaka mitantana, amin'ny ranomandry, zavona na be orana vao tonga tahotra ary afaka mamorona maika mihitsy aza ny toe-javatra. Saingy rehefa manomboka mianatra toeram mialoha, dia ho mora kokoa ny mianatra.
Virtuosi tsy nateraky ny misy raharaham-barotra – dia lasa. Vitsy no mahalala ny fomba fitondrako fiara fiara sy mianatra ny famantarana rehetra, dia tsy maintsy ihany koa mahay Park. Ao amin'ny tanàn-dehibe amin'ny fiantsonan'ny foana ny olana, ary ny toerana mandeha any amin'ny olona izay dia ho afaka maka izany haingana. Mba mampihatra izany fahaiza-manao, mahasoa maimaim-poana amin'ny aterineto lalao Parking, izay afaka milalao isan-karazany eo amin'ny vavahadin-tserasera. Mifidiana ny mpandeha fiara, kamiao, traktera na fitaovana hafa, ary avy eo dia apetraho eo amin'ny banga be. Indraindray tsy maintsy manao izany amin'ny hafainganam-pandeha feno.
Ny tsara indrindra Parking lalao
Fahalalana Super fijanonana 2
Park azy rehetra
Heavy vohavoha kamiao
Parking Circus Caravan
Fijanonana ny fiaramanidina eo amin'ny fiaingana
18 kodia mpamily 5
Park ny fiaran-dalamby
Super Car fijanonana
JFK Fiaramanidina fijanonana
Long mpamily fiara fitateram-bahoaka
Hazo mpamily kamiao 2
Just 6 valet fiantsonan'ny
Parking fiaran'ny polisy 2
Hampisaraka ny fijanonana miditra tsimoramora
Tom sy Jerry Tom daroka baomba
Fijanonana ny traktera
Crazy Parking: Driving
Cleve adala fiarakaretsaka
Sekoly mpamily fiara fitateram-bahoaka
Parking amin'ny fiantsonan'ny fiara fitateram-bahoaka
OU Taxi fijanonana
Parking ao amin'ny fanaka showroom
Parking tao an-tanàna
Nandresy Tokyo Parking
Fijanonana ny fiara fitateram-bahoaka tao amin'ny seranam-piaramanidina - 2
Poultices ny kamiao 3
Parking tilikambo vano
Parking fiara fitateram-bahoaka
Fiara: McQueen rehefa avy nandoko
Krismasy kamiao fijanonana
Ny mpamily iray mavesatra kamiao 2
Mavo convertible - Parking Taxi
Polisy Parking V8
Easy fijanonana 9
Parking fiaran'ny polisy
Fotoana Park 2
Lalao Parking tamin'ny Category:
Just valet fijanonana
Farany Parking lalao
Dr. Fiara 4
Fiantsonan'ny fiara fitaterana
Mianara miatrika valetera
Fiara fiara eo alàlan'ny fiara
Fijanonan'ny fiara moto 3
Fiaramanidina fiara marobe an'ny polisy
Fijanonan'ny fiara 2
Mpamily kamiao Rosiana Kamaz 2
Volga Russian Rosiana 24
Milalao lalao an-tserasera fijanonana, miezaka mba tsy hikasika ny manodidina milina sy mitantana ny haka malalaka toerana fijanonana
Any Amerika, dia afaka mahazo ny fahazoan-dalana ny mpamily amin'ny enina ambin'ny folo, dia – amin'ny valo ambin'ny folo, ary mividy toaka ihany no mba hanatratra amby roa-polo taona izy.
Fantaro ny fahaiza-Park nandritra ny lalao
Ny fahaizana mametraka – izany dia mihoatra sarotra fotsiny ny diany, sy ny lalao an-tserasera Parking Hiezaka hasehoko anao izany amin'ny fomba fanao. Raha toa ianao ka efa zatra an'ilay hazakazaka, dia tsy midika fa ho smartly fotsiny Park. Hanomboka, mifidy kilalao fa tsy mila ny hafainganam-pandeha sy araka ny marina ny tena asa.
Natolotro azy kely sy miverina, miezaka mba hifanaraka amin'ny vanim-potoana iray maimaim-poana ao amin'ny fitobiam-piarakodia mba tsy handratra ny hafa ny milina. Famerimberenana – ny reny ny fianarana. Raha tsy aorian'ny fotoana ny lesona maro tsy misy diso, dia afaka miala eo amin'ny zavatra lehibe kokoa. Aoka àry ny hoe efa nahazo traikefa. Avy eo ianao dia mety ho:
mpamily fiara mpitondra marary,
polisy ary tafiditra ao anatin'ny fikatsahana fivoarana eo amin'ny toerana malalaka amin'ny masoandro. &Nbsp;
Ny fifaninanana lehibe ho toerana ao amin'ny fitobiam-piarakodia
Ny ady dia ho masiaka – Amin'ny ady toy ny ao amin'ny ady! Tokony ianao mahita ny voatsoaka toerana ary alefaso any ny kodiarana, mananontanona eo amin'ny faravodilanitra toy ny hafa contenders. Ary toa izy ireo, satria lehibe ny zozoro ho azy, tsy mampihena hafainganam-pandeha. Firehitry, mazava ho azy, ianao no voalohany mba mahita zavatra foana fitobian'ny fiara, fa izany no lalàna ny amin'ny ala tanàna – nefa izy no voalohany, dia nataony. Fa Eny, raha ianao iray ao amin'ny Salon – dia afaka miandry fomba hafa mety mba hitady ny fitobiam-piarakodia, na any an-kafa. Ary raha manana seza indray mpandeha izay tara amin'ny fiaramanidina sy amin'ny tahotra niantsoantso: « roa tranombarotra, ny lehiben'ny, roa tranombarotra! &Raquo;. Izany no karazana; « ry mpamily, raha afaka mitondra ahy ho any amin'ny toerana ny tonga ny fotoana, ka tsy tara aho noho ny sidina, misaotra anareo mendrika tendron'ny ravin ».
mba handresy ny zava-tsarotra
hafa lalao toeram-tserasera toe-javatra, rehefa tokony hiditra ny kalesy amin'ny toerana iray amin'ny alina teo amin'ny mamirifiry lalana ao amin'ny zavona, ary mando ny oram-panala sy ny orana. Hanorenana ity, ary amin'ny tsara ny andro dia sarotra ny fanaraha-maso, tsy lazaina intsony ny fitobiam-piarakodia, Ary izy rehetra dia herin'ny natiora niodina taminao hoe: Ahoana ary? Aza intsony mandra-pahatapitry ny lasantsy? Na mety mbola miezaka ny mijanona? Mandritra izany fotoana izany, ary ny fisotroana dite ao amin'ny kafe izay mahasarika tena namana hazavana mafana ao am-baravarankely. Ny fahafahana mametraka ny fiara avy amin'ny zavatra niainany, na dia mbola ampianarina ao mitondra fiara-pianarana ary natao tafiditra ao ny tsy maintsy fandaharana ny fanadinana.
Parking eo amin'ny tontolo maoderina dia lasa be dia be ao anatin'ny fahaizana mitondra fiara, ary koa ny fitantanana ny fiara mampihetsi-po. Aoka moa ity fiofanana ao amin'ny fiantsonan'ny lalao manokana. Ao aminy no mahita ny fiara amin'ny tanàna eny an-dalana na ny fitobian'ny fiara, ary koa ny toerana manokana omena dia ilaina ny Park. Manao zavatra tena tsara eto, satria misy ratsy hetsika mety hiafara amin'ny loza, araka izay manodidina ny lalao dia tsy maintsy manomboka indray. Teny an-dalana ny fiara dia ho be dia be ny vato misakana – Ny olona indraindray hiampita ny lalana, fiara hafa dia mijanona ka mbola eo aminy ihany no ho tery andalan-teny, voninkazo fandriana hampahamendrika ny fitobiam-piarakodia izy ireo ary mila mitandrina mba tsy. Fijanonana Tsy foana ny lalao ho azo tanterahina ny hoe tsikelikely haka ny hafainganam-pandeha, na mitondra fiara amin'ny fifindran'ny nampihena – Machine no ara-bakiteny nanenika amin'ny toerana misy maika ny « Entona ». Ny mampiavaka manokana ny fitantanana izany dia tsy maintsy hatao zatra ka aza manahy raha mandritra ny fanofanana no hanorotoro ny lafiny iray ny fiara.
hahazo traikefa amin'ny filalaovana lalao Parking
Parking amin'ny lalao video tena hafa manolotra fitaterana. Mety ho:
Ny mahazatra fiara
Formula 1 fiara
fiaramanidina na ny sambon-danitra
ny zavatra rehetra atao ao amin'ny toerana samy hafa:
ao an-tanàna amin'ny mavesatra fifamoivoizana
akaikin'ny fivarotana lehibe
amin'ny interplanetary toerana
Indraindray ny lalao azo aseho ao amin'ny toerana tena. Ohatra, ny Indiana tanànan'i Mumbai – iray amin'ireo lehibe indrindra eo amin'izao tontolo izao. Eto dia mila ny ho mpamily fiarakaretsaka ao an-toerana sy miezaka ny hiatrika ny fifamoivoizana goavana mikoriana eny an-dalana, nisafotofoto milina nametraka amoron-dalana toeram faritra, ny olona mibahana ny lalana ho any amin'ny fitobiam-piarakodia, ny alika nandry teny an-dalana. Indraindray mandalo lalao fihodinana noho ny fanatanterahana ny asa manokana. Afaka mifidy sy disembarkation ny mpandeha amin'ny toerana samy hafa, matetika – fiarakaretsaka. Na ny fitaterana ny entana amin'ny kamiao – mpilalao mba hanomboka dia ny hametahana ny mahavariana tranofiara towing fiara, dia hitondra azy ho any amin'ny Loading, fitaterana ho any amin'ny toerana, notaterina ka mandehana ho enta-mavesatra vaovao. Misy toerana fijanonana dia mety ho tena akaiky ny toerana voalohany ny milina. Fa misy asa izay dia ilaina ny mifindra any amin'ny lavitra lelan-tanàna, nitari-dalana ny alalan 'ny Misafotofoto sy eny an-dalambe mampiasa karatra Mini manokana. Ny ankamaroan'ny lalao fijanonana Mizara ho ambaratonga, ny tsirairay izay takiana mba hanao asa vaovao. Fotoana matetika mijanona any voafetra, noho izany dia mila manao zavatra tsy marina, fa koa haingana. Noho ny fampiasana sary amin'ny lafiny telo-misy lalao fiantsonan'ny 3D. Safidy io dia manome anao fahafahana bebe kokoa mba hijery sy toeram tsara toerana ho an'ny mitondra fiara.